တူရကီဗီဇာလျှောက်လွှာကိုအွန်လိုင်းတွင်လျှောက်ထားပါ၊ တူရကီဗီဇာအွန်လိုင်း၊ ခရီးသွားဗီဇာရယူပါ။
တူရကီ eVisa လျှောက်လွှာလုပ်ငန်းစဉ်
တူရကီ eVisa လိုအပ်ချက်များ
တူရကီ eVisa အမျိုးအစားများ
Ankara တွင် လုပ်ဆောင်ရမည့် ထိပ်တန်းအရာများ
Izmir ရှိ ထိပ်တန်း ခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုများ
2022 ခုနှစ်တွင် ခရီးသွားခြင်းနှင့် ဝင်ခွင့်ကန့်သတ်ချက်များ
တူရကီ eVisa (အီလက်ထရွန်နစ် ခရီးသွားခွင့်ပြုချက်)
Turkey Visa Online သည် တူရကီအစိုးရမှ 2016 ခုနှစ် ဇူလိုင်လမှ စတင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သော အီလက်ထရွန်နစ်ခရီးသွားခွင့်ပြုချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Turkey e-Visa အတွက် ဤအွန်လိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် ၎င်း၏ကိုင်ဆောင်ထားသူအား နိုင်ငံအတွင်း ၃ လအထိ နေထိုင်ခွင့်ပေးသည်။
1. eVisa လျှောက်လွှာကိုဖြည့်ပါ
2. eVisa ကိုအီးမေးလ်ဖြင့်လက်ခံပါ
တူရကီ eVisa သို့မဟုတ် တူရကီဗီဇာ အွန်လိုင်း ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
Turkey eVisa သည် တူရကီအစိုးရမှ ခွင့်ပြုထားသော အွန်လိုင်းစာရွက်စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကတူရကီနိုင်ငံထဲကို ၀ င်ခွင့်ပြုတယ်မရ။ အရည်အချင်းပြည့်မီသောနိုင်ငံသားများသည်၎င်းအားဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်သည် တူရကီဗီဇာလျှောက်လွှာပုံစံ သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အချက်အလက်များနှင့်အတူဤ website တွင်
တူရကီ eVisa is ဗီဇာမျိုးစုံ ဒါကခွင့်ပြုပါတယ် ရက် ၉၀ အထိနေနိုင်သည်. တူရကီ eVisa ဖြစ်ပါ သည်။ ခရီးသွားနှင့်ကုန်သွယ်ရေးအတွက်သာအကျုံးဝင်သည်.
တူရကီဗီဇာအွန်လိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရက်ပေါင်း 180 အဘို့အတရားဝင် ထုတ်သည့်နေ့မှစ၍ သင်၏တူရကီဗီဇာအွန်လိုင်း၏တရားဝင်ကာလသည် နေထိုင်သည့်ကာလထက် ကွဲပြားသည်။ Turkey eVisa သည် ရက်ပေါင်း 180 သက်တမ်းရှိသော်လည်း သင်၏ကြာချိန် ရက်ပေါင်း ၁၈၀ အတွင်းရက် ၉၀ ထက်မကျော်လွန်နိုင်ပါမရ။ ရက်ပေါင်း ၁၈၀ သက်တမ်းကာလအတွင်းတူရကီသို့အချိန်မရွေး ၀ င်နိုင်သည်။
တူရကီ eVisa သည်တိုက်ရိုက်နှင့် မင်းရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းနဲ့ချိတ်ထားတယ်. တူရကီနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အရာရှိများသည် ဆိပ်ကမ်းဝင်ပေါက်တွင် ၎င်းတို့၏စနစ်တွင် တူရကီ eVisa ၏တရားဝင်မှုကို စစ်ဆေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း သင့်ထံ အီးမေးလ်ပို့မည့် တူရကီ eVisa ၏ soft copy ကို သိမ်းဆည်းထားရန် အကြံပြုလိုပါသည်။
တူရကီဗီဇာလျှောက်လွှာကို လုပ်ဆောင်ရန် အချိန်မည်မျှကြာသနည်း။
လျှောက်လွှာအများစုကို 24 နာရီအတွင်းလုပ်ဆောင်နေသော်လည်း Turkey eVisa အတွက်လျှောက်ထားရန်အကြံပြုလိုပါသည်။ အနည်းဆုံးနာရီ 72 သင်နိုင်ငံသို့ ၀ င်ရန်သို့မဟုတ်သင်၏လေယာဉ်ပေါ်မတက်မီ
တူရကီဗီဇာအွန်လိုင်း သင်ဖြည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည့် အမြန်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တူရကီဗီဇာလျှောက်လွှာ အွန်လိုင်းတွင် ပြီးမြောက်ရန် (၅) မိနစ်ခန့် ကြာနိုင်သည်။ ဤသည်မှာ လုံးဝအွန်လိုင်းဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာပုံစံကို အောင်မြင်စွာ ပြီးမြောက်ပြီး လျှောက်ထားသူသည် အွန်လိုင်းမှ အခကြေးငွေပေးဆောင်ပြီးနောက် တူရကီ Visa Online ကို ထုတ်ပေးပါသည်။ Turkey Visa Application အတွက် ခရက်ဒစ်/ဒက်ဘစ်ကတ် သို့မဟုတ် PayPal ကို အသုံးပြု၍ ငွေကြေး5ကျော်ဖြင့် ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။ ကလေးများအပါအဝင် လျှောက်ထားသူအားလုံးသည် တူရကီဗီဇာလျှောက်လွှာကို အပြီးသတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထုတ်ပေးပြီးသည်နှင့်၊ တူရကီ eVisa ကို လျှောက်ထားသူ၏ အီးမေးလ်သို့ တိုက်ရိုက် ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။.
တူရကီ eVisa အတွက် Covid အပ်ဒိတ်
တူရကီအစိုးရသည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်ခရီးသွားများအတွက်နိုင်ငံတကာခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်၎င်း၏ပွဲစားကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်းတူရကီသို့ခရီးသွားများသည်လက်ရှိ COVID-19 ခရီးသွားကန့်သတ်ချက်များကိုသတိပြုသင့်သည်။
တူရကီလေဆိပ်များရှိ ကိုယ်တိုင်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် eVisa ကတ်များနှင့် wifi ဧရိယာများကို ဖယ်ရှားပါမည်။ ထို့ကြောင့် ဆိုက်ရောက်စဥ်တွင် eVisa ရရှိခြင်းမှာ မရနိုင်တော့ဘဲ တူရကီသို့ လာရောက်လည်ပတ်သူများသည် eVisa အတွက် ကြိုတင်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
အသက် ၆ နှစ်နှင့်အထက်ခရီးသွားများသည်ထွက်ခွာချိန်မတိုင်မီ ၇၂ နာရီထက်ပိုပြီးအနုတ်လက္ခဏာဆောင်သော COVID-6 PCR စစ်ဆေးမှုခံယူရပါမည်
ခရီးသည်များ ပြည့်စုံအောင် တင်ပြရမည်။ ခရီးသွားဝင်ခွင့်ပုံစံ လေယာဉ်နဲ့ ဆိုက်ရောက်ဗီဇာအတွက် check in လုပ်တဲ့အခါ
ဘရာဇီး၊ အိန္ဒိယ (သို့) တောင်အာဖရိကတို့တွင်လွန်ခဲ့သော ၁၀ ရက်ကရောက်ရှိခဲ့သောဆိုက်ရောက်ဗီဇာများသည် ၁၄ ရက်ကြာသီးသန့်ခွဲထားရမည်
Turkey Visa Online အတွက် ဘယ်သူတွေ လျှောက်ထားနိုင်မလဲ။
နိုင်ငံခြားရောက်ချင်သူများ ခရီးသွားများ သို့မဟုတ် စီးပွားရေးကိစ္စများအတွက် တူရကီသို့ ခရီးသွားပါ။ ပုံမှန် သို့မဟုတ် သမားရိုးကျဗီဇာ သို့မဟုတ် အီလက်ထရွန်းနစ် ခရီးသွားခွင့်ပြုချက်ဟုခေါ်သော လျှောက်ထားရမည်။ တူရကီဗီဇာအွန်လိုင်းမရ။ အစဉ်အလာတူရကီဗီဇာရယူနေစဉ်အနီးဆုံးတူရကီသံရုံး (သို့) ကောင်စစ်ဝန်ရုံးသို့သွားပါ တူရကီ eVisa အကျုံးဝင်သော နိုင်ငံများ ရိုးရှင်းသောတူရကီဗီဇာလျှောက်လွှာပုံစံကိုဖြည့်ခြင်းဖြင့်တူရကီ eVisa ကိုရယူနိုင်သည်။
လျှောက်ထားသူများသည် ၎င်းတို့၏ မိုဘိုင်း၊ တက်ဘလက်၊ PC သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာမှ တူရကီ eVisa အတွက် လျှောက်ထားနိုင်ပြီး ၎င်းကို အသုံးပြု၍ ၎င်းတို့၏ အီးမေးလ် ဝင်စာပုံးတွင် လက်ခံရရှိနိုင်ပါသည်။ တူရကီဗီဇာလျှောက်လွှာပုံစံ. အောက်ဖော်ပြပါ နိုင်ငံများနှင့် နယ်မြေများ၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်သူများသည် ဆိုက်ရောက်မတိုင်မီ အခကြေးငွေဖြင့် တူရကီဗီဇာများကို အွန်လိုင်းတွင် ရယူနိုင်ပါသည်။ ဤလူမျိုးအများစုအတွက် နေထိုင်သည့်ကြာချိန်သည် ခြောက်လ (၆)လတာကာလအတွင်း ရက်ပေါင်း ၉၀ ဖြစ်သည်။
အောက်ဖော်ပြပါ နိုင်ငံများနှင့် နယ်မြေများ၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်သူများသည် ဆိုက်ရောက်မတိုင်မီ အခကြေးငွေဖြင့် တူရကီဗီဇာ အွန်လိုင်းကို ရယူနိုင်ပါသည်။ ဤလူမျိုးအများစုအတွက် နေထိုင်သည့်ကြာချိန်သည် ရက်ပေါင်း 90 အတွင်း ရက် 180 ဖြစ်သည်။
တူရကီ eVisa ဖြစ်ပါ သည်။ ရက်ပေါင်း ၁၈၀ သက်တမ်းရှိသည်. ဤလူမျိုးအများစုအတွက် နေထိုင်သည့်ကြာချိန်သည် ခြောက်လ (၆)လတာကာလအတွင်း ရက်ပေါင်း ၉၀ ဖြစ်သည်။ Turkey Visa Online သည် တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဗီဇာမျိုးစုံ.
အောက်ဖော်ပြပါနိုင်ငံများ၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားသူများသည် အောက်ဖော်ပြပါအခြေအနေများကို ကျေနပ်မှသာ ရက်ပေါင်း 30 အထိ နေထိုင်နိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသော ၀င်ခွင့်တူရကီဗီဇာ အွန်လိုင်းတွင် လျှောက်ထားရန် အရည်အချင်းပြည့်မီသည်-
လူမျိုးအားလုံးသည်တရားဝင်ဗီဇာ (သို့) ခရီးသွားဗီဇာ (Visa) ကိုကိုင်ဆောင်ထားရမည် Schengen နိုင်ငံများအိုင်ယာလန်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု (သို့) ဗြိတိန်။
လူမျိုးအားလုံးသည်တစ် ဦး ထံမှနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားရမည် Schengen နိုင်ငံများအိုင်ယာလန်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု (သို့) ဗြိတိန်
မှတ်စု: အီလက်ထရောနစ်ဗီဇာ (e-Visa) သို့မဟုတ် e-Residence ပါမစ်များကိုလက်မခံပါ.
Turkey eVisa လျှောက်ထားလိုသော ခရီးသွားများသည် အောက်ပါအခြေအနေများကို ဖြည့်ဆည်းပေးရမည်-
လျှောက်ထားသူ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြစ်ရပါမည် ထွက်ခွာမည့်ရက်ထက်အနည်းဆုံး ၆ လသက်တမ်းရှိသည်အဲဒါကမင်းတူရကီကနေထွက်ခွာတဲ့နေ့ပဲ။
လျှောက်ထားသူသည် တူရကီ eVisa ကို အီးမေးလ်ဖြင့် လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ထို့ကြောင့် တူရကီဗီဇာလျှောက်လွှာပုံစံကို ဖြည့်ရန် တရားဝင်အီးမေးလ် ID လိုအပ်ပါသည်။
မှစ. တူရကီဗီဇာလျှောက်လွှာပုံစံ စက္ကူညီမျှခြင်းမရှိဘဲအွန်လိုင်းတွင်သာရနိုင်သောခိုင်လုံသော credit/debit card တစ်ခုလိုအပ်သည်။ ငွေပေးချေမှုအားလုံးကို သုံး၍ လုပ်ဆောင်သည် PayPal ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်ကိုလုံခြုံအောင်လုပ်ပါ.
Turkey eVisa လျှောက်ထားသူများသည် တူရကီဗီဇာလျှောက်လွှာပုံစံကို ဖြည့်စဥ်ချိန်တွင် အောက်ပါအချက်အလက်များကို ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
တူရကီဗီဇာ အွန်လိုင်း လျှောက်ထားသူအား တူရကီနယ်စပ်တွင် စာရွက်စာတမ်းများ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ရှေ့သို့ / လေယာဉ်လက်မှတ်။
လျှောက်ထားသူတွင်ကြိုတင်လက်မှတ်မရှိပါက၎င်းတို့တွင်ရန်ပုံငွေအထောက်အထားနှင့်အနာဂတ်တွင်လက်မှတ် ၀ ယ်ခြင်းစွမ်းရည်ရှိနိုင်သည်။
သင်၏တူရကီ eVisa ကို print ထုတ်ပါ။
သင်၏တူရကီဗီဇာလျှောက်လွှာအတွက် ငွေပေးချေမှုကို အောင်မြင်စွာပြုလုပ်ပြီးနောက်၊ သင်၏တူရကီ eVisa ပါ၀င်သည့် အီးမေးလ်တစ်စောင်ကို သင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ တူရကီဗီဇာလျှောက်လွှာပုံစံတွင် သင်ထည့်သွင်းထားသည့် အီးမေးလ်ဖြစ်သည်။ သင်၏ တူရကီ eVisa မိတ္တူကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး ပရင့်ထုတ်ရန် အကြံပြုလိုပါသည်။
သင့်မိတ္တူကို print ထုတ်ပြီးနောက် တူရကီဗီဇာအွန်လိုင်းသင်၏တရားဝင်တူရကီဗီဇာဖြင့် ယခုအခါတွင် တူရကီနိုင်ငံသို့ သွားရောက်နိုင်ပြီး ၎င်း၏အလှနှင့် ယဉ်ကျေးမှုကို ခံစားနိုင်ပါပြီ။ Hagia Sophia၊ Blue Mosque၊ Troy နှင့် အခြားများစွာသော မြင်ကွင်းများကို သင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ သားရေအကျီများမှ လက်ဝတ်ရတနာများအထိ အမှတ်တရပစ္စည်းများအထိ အရာအားလုံးရရှိနိုင်သည့် Grand Bazaar တွင် သင့်စိတ်နှလုံးကို နှစ်သက်စေမည့် အကြောင်းအရာများကိုလည်း စျေးဝယ်နိုင်ပါသည်။
သို့သော် အကယ်၍ သင်သည် ဥရောပရှိ အခြားနိုင်ငံများသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ရန် စိတ်ကူးနေပါက၊ သင်၏တူရကီ ခရီးသွားဗီဇာကို တူရကီနှင့် အခြားနိုင်ငံများတွင်သာ အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း သိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော် ဤနေရာတွင် သတင်းကောင်းမှာ သင်၏တရားဝင်တူရကီဗီဇာသည် အနည်းဆုံး ရက် 60 သက်တမ်းရှိသောကြောင့် သင့်တွင် တူရကီနိုင်ငံအားလုံးကို စူးစမ်းရန် အချိန်အလုံအလောက်ရှိသည်။
ထို့အပြင် တူရကီနိုင်ငံရှိ eVisa ဖြင့် တူရကီနိုင်ငံသို့ ခရီးသွားတစ်ဦးဖြစ်ခြင်းကြောင့် ၎င်းသည် သင်မကြာခဏလိုအပ်မည့် တစ်ခုတည်းသော သက်သေခံအထောက်အထားဖြစ်သောကြောင့် သင်၏ပတ်စ်ပို့ကို လုံခြုံအောင်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ မဆုံးရှုံးရစေနှင့် သို့မဟုတ် လှဲလျောင်းထားလိုက်ပါ။
သင်၏တူရကီ E-VISA ကိုအွန်လိုင်းမှစီမံဆောင်ရွက်ရာတွင်အရေးပါဆုံးသောအချက်အချို့သာ
ဇယားပါအကြောင်းအရာကိုကြည့်ရန်ဘယ်ဘက်နှင့်ညာသို့ scroll လုပ်ပါ
ဆုံးရှုံးမှုရှိပါကသင်၏ eVisa ကိုအီးမေးလ်ပြန်လည်ရယူပါ။
e-VISA တူရကီနိုင်ငံ ELIGIBILE နိုင်ငံများ
e-VISA TURKEY အမေးအဖြေများ
www.turkey-visa-online.org မှ © မူပိုင်ခွင့် 2022
မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်- ဤစီးပွားရေးဝဘ်ဆိုဒ်မှထုတ်ပေးသော Turkey eVisa ကို တူရကီအစိုးရဝဘ်ဆိုဒ်တွင် တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားပါသည်။ တူရကီသမ္မတနိုင်ငံအစိုးရသည် www.turkey-visa-online.org ကို တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်သောနည်းဖြင့်ဖြစ်စေ သီးသန့်ခန့်အပ်ထားခြင်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဤဝဘ်ဆိုက်တွင် လျှောက်ထားသူများအတွက် အစိုးရ Visa Levy အတွက် ကျွမ်းကျင်ကြေး ကောက်ခံပါသည်။